Iindaba -Yintoni ekufuneka ihlawulwe kwinkqubo yokusebenzisa ilaphu lefoyile ye-aluminium kwindawo yangaphandle
I-aluminium foil ifayibha enganyangekiyo nomlilo inokubizwa ngokuba yi-ceramic fiber kunye ne-aluminium silicate fiber. Ifayibha yodongwe ngummeli ophambili wefayibha engatshiyo ngengqondo ebanzi, eligama lilonke lealuminium, isilica, i-aluminium silicate kunye ne-zirconia ifayibha engatshiyo. Okwangoku, ifayibha enganyangekiyo ngomlilo ikwabandakanya i-carbon fiber, i-nitride fiber, i-boride fiber kunye ne-non oxide fiber. Ngomqondo omxinwa, yi-aluminium silicate kuphela enyibilikisiweyo okanye i-oxidized Kuphela yifayibha ene-sol fibrosis enokwenziwa kwifayibha yodongwe.
Ukuqwalaselwa kwengubo yefoyile ye-aluminium kwinkqubo yokwaleka kwangaphandle:
1.Ukutyeba kwangaphandle le-layer layer: umda wexabiso lokuhambisa ubushushu kumlinganiso wolondolozo lwamandla ngumgangatho osisiseko womgangatho, kwaye ibhulorho yobushushu yendawo kufuneka ithintelwe. Xa kusetyenziswa inkqubo yokwambathisa yangaphandle eyenziwe ngentsimbi enemingxunya yentsimbi izinto ezidityanisiweyo isetyenziswa, ubukhulu obufunekayo bokugquma umaleko kuya kugqitywa ngokweziphumo zomlinganiso. Ukunciphisa ukuhanjiswa kobushushu kunye nokusetyenziswa kobushushu eludongeni, ayisiyonyani nje kuphela ubukhulu bokugquma. I-UK ngokubhekisele kwi-insulation, insulation kunye nokuqina komoya eludongeni ngokubanzi.
2. Ukusebenza kokugquma kwangaphandle: Nangona ukufakelwa kunefuthe elithile lokuthambisa, alilingani nokugquma kobushushu, ngakumbi kwiindawo ezishushu zasehlotyeni nakwiindawo ezibandayo zasebusika. Ngaphandle kwendlela yokufudumala kwemozulu, ukusebenza kwe-thermal insulation kufanele kuthathelwe ingqalelo kwaye amanyathelo kufuneka aqiniswe.
3. Inkqubo nganye yokugquma inenkqubo yemveliso, kunye nokusebenza kobuchwephesha kwinto nganye kufuneka ihambelane nemigangatho efanelekileyo. Udonga lokugquma lwangaphandle kufuneka lufakwe eludongeni ukuze lwenze. Ke ngoko, ukusebenza kwenkqubo kufuneka kuthathelwe ingqalelo ngokupheleleyo, kuba kuthwala izinto ezahlukeneyo zangaphandle kwaye ziyahlangabezana neemfuno zokugquma kobushushu.
Ngasentla amanyathelo okhuseleko kwilaphu lefoyile ye-aluminium kwinkqubo yokusebenzisa umaleko wangaphandle wokugquma. Ngokubanzi, nganye inezibonelelo zayo. Sinokusebenza ngokweemeko zabo. Ndiyathemba ukuba eli nqaku lingakunceda.
Ixesha Post: May-13-2021